Waa maxay Tartanka Waqtiga-Dheer (RTB)? | Martech Zone
Waa maxay Tartanka Waqtiga-Dheer (RTB)?
Khamiista, Sebtember 17, 2015 Jimcaha, Sebtember 18, 2015 Douglas Karr
Labada raadinta lacag bixinta, muujinta iyo xayeysiinta moobiilka, waxaa jira tiro badan oo lagu iibsado aragti. Si loo helo natiijooyin adag, waa inaad tijaabisaa iibsashada boqolaal ama xitaa kumanaan isku-dhafan ereyada raadinta lacag bixinta. Haddii aad sameyneyso xayeysiis ama xayeysiin moobiil ah, tirakoobka waxaa laga yaabaa inuu ku faafo boqolaal ama kumanaan boggag ama barnaamijyo.
Waa maxay Tartanka Waqtiga-Real?
Inaad gacanta ku kormeerto oo aad ku dalbato meelaha aad rabto inaad xayeysiiso waxay noqoneysaa wax aan macquul aheyn. Si tan loo saxo, raadinta lacag bixinta iyo isweydaarsiga xayeysiiska ah waxay adeegsadaan xaraashka waqtiga-dhabta ah (RTB). Iyada oo la adeegsanayo qandaraas-waqtiga-dhabta ah, suuq-geygu wuxuu dejiyaa caqabadaha xayeysiintooda iyo miisaaniyaddooda, nidaamkuna wuxuu ka gorgortamayaa meeleyn kasta oo ah xaraashka waqtiga-dhabta ah ee dhaca ku dhowaad isla markiiba.
RTB waxay noqon kartaa mid hufan oo khatar ah. Haddii aadan ahayn isticmaale khibrad leh, ma xadidi kartid xayeysiiskaaga iibsiga iyo inaad lumiso miisaaniyadda adoo ku xayeysiinaya isku-darka ereyada muhiimka ah ama bogagga aan khuseyn. Sifiican ayaa loo qabtay, in kastoo, waxtarka iyo waxtarka RTB ay aad uga culus yihiin faragalinta gacanta oo dhan.
Sidee ayuu Waqtiga-Waqtiga-iibku u Hormarsan yahay?
Nidaamyada Xogta Weyn ee soo saari kara isla markaana beddeli kara malaayiin diiwaanno iyo waqti-dhab ah - oo ay ku jiraan xogta beddelidda - ayaa gacan ka geysanaya horumarinta RTB wax ka yar dhimista kharashka dalabka iyo kordhinta heerarka gujinaya. Adiga oo falanqeynaya xogta beddelka waqtiga-dhabta ah, qofka booqdayaasha ah, iyo xitaa dabeecadaha iskutallaabta, aaladda RTB xitaa waxay awood u leeyihiin inay si sax ah u saadaaliyaan meeleynta xayeysiiska saxda ah, waqtiga saxda ah, qofka saxda ah hortiisa, aaladda saxda ah.
Waxaan kahadalnay awoodaha qandaraaska-waqtiga dhabta ah Xayeysiinta Barnaamijka on our Podcast dhawaan la Pete Kluge. Hubso inaad dhagaysato Podcast-ka - wuxuu ahaa wada hadal aad u wanaagsan.
Dhageyso Wareysigeena Pete Kluge ee Adobe
Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Waqtiga Xaqiijinta Qandaraaska
Halkan waxaa ku yaal guudmar faahfaahsan oo ku saabsan Bixinta Waqtiga-Xilliga ah ee 'infographic'.
Video ka MediaMath.
Tags: isweydaarsiga xayeysiiskabandhig xayeysiisBixi halkii gujippciibinta waqtiga-dhabta ahrtb
13 Dariiqo oo Bartilmaameedka Muuqaalkaaga Xayeysiinta ah